कारका लागि इलेक्ट्रिक वाटर पम्प, चीनमा BMW इलेक्ट्रिक पानी पम्प आपूर्तिकर्ता - JIAYANG
घर / उत्पादनहरू / कारको लागि इलेक्ट्रिक पानी पम्प
इलेक्ट्रिक पानी पम्प HEV, EV वा FCV मा स्थापना गरिएको छ यी गाडीहरूको वरपरका उपकरणहरू शान्त पार्न। परम्परागत मेकानिकल पानी पम्प दहन इञ्जिन द्वारा संचालित ईन्जिनको वरिपरि शीतलक प्रसारण गर्न। शीतलकको मात्रा इन्जिन क्रान्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ। मागमा शीतलक भोल्युमको नियन्त्रण मात्र मेकानिकल सम्भव छैन। यो या त overcool वा undercool हुन सक्छ।
इलेक्ट्रिक पानी पम्प ब्याट्री र मोटर द्वारा मात्र चिसो को मांग मा सक्रिय छ। केवल समारोह ईन्जिन मा लोड न्यूनतम।
११1१75888588585 १११17636324२26 BM बीएमडब्ल्यू इलेक्ट्रिक वाटर पम्प
कार मोडेल: BMW को लागी
प्याकिंग: तटस्थ प्याकेज
सेवा: २ H घण्टा ग्राहक सेवा
11517597715 अटो इलेक्ट्रिक वाटर पम्प
कार मोडल: E84 F30 320i 328i X1 320i
कार फिटमेन्ट: बीएमडब्ल्यू
उत्पाद नाम: इलेक्ट्रिक पानी पम्प
को लागी प्रयोग: E84 F30 320i 328i X1 320i
गुण: १००% परिक्षण, उच्च प्रदर्शन
MOQ: १० पीसी
११1१758869। २ BM बीएमडब्ल्यू इलेक्ट्रिक वाटर पम्प बिक्रीको लागि
कार मोडल: 128i 328i 528i X3 X5 Z4
प्रयोगका लागि: १२8i 8२8i 8२8i X3 X5 Z4
११1१758383 128366 १२v इलेक्ट्रिक पानी पम्प कारका लागि
उत्पत्तिको स्थान: चांग्झाउ,
ChinaBrand नाम: BESTJOYI
कार मोडेल: Bmw F18 (5series) F02 / 730Li (N52B30AF) को लागि
इलेक्ट्रिक पानी पम्प VS परम्परागत पानी पम्प
कसैलाई किन बिजुली पानी पम्प चाहिन्छ भनेर बुझ्नको लागि, पहिले तपाईंले परम्परागत, मेकानिकल पानी पम्पको उद्देश्य र कमिहरू बुझ्नु पर्छ। प्राविधिक रूपमा, यो शीतलक र एन्टी-फ्रीज पम्प हो, तर हामी यसलाई छोटोको लागि पानी पम्प भन्नेछौं किनकि प्राय जसो अटो टेक्नीशियनहरूले यसलाई सन्दर्भ गर्दछन्।
परम्परागत पानी पम्प एक बेल्ट संचालित (वा कहिलेकाँही क्याम चालित) घटक हो। अर्को शब्दमा, यो ईन्जिनबाट म्याकेनिकल, घुमाउने उर्जा लिन्छ - स्पिनिning रबर बेल्टको रूपमा प्रदान गरिएको छ - र यसलाई आन्तरिक पम्प म्याकेनिज ड्राइभ गर्न प्रयोग गर्दछ। पम्पमा एक प्ररितकर्ताले इन्जिन ब्लक मार्फत घुमाउरो यात्रामा इन्जिन शीतलक पठाउँदछ तातो लिन, त्यसपछि रेडिएटरमा, जहाँ शीतलकले तातो बहाउँछ र पम्प मार्फत फेरि फिर्ता जान्छ।
यसको पानी पम्प चल्दा, एक विशिष्ट अटो ईन्जिन लगभग २०० डिग्री फरेनहाइट (93 .3..3 डिग्री सेल्सियस) को तुलनात्मक आरामदायक छरछिमेकमा रहन्छ र सबै जना खुशी छन्, तपाईंको कार सहित। त्यसोभए मिक्समा बिजुलीबाट संचालित संस्करण किन फ्याँक्दै यस्तो राम्रो चीजको साथ गडबड?
यहाँ चीज छ: कुनै पनि एक्सेसरी जुन ईन्जिन बेल्टको ऊर्जाबाट चल्दछ तपाईंलाई लागत लाग्दो छ। यसले या त हर्सपावर, ईन्धन अर्थव्यवस्था वा दुबैको गाडी हडप गर्दछ। तपाइँलाई थाहा छ कसरी तपाइँको सवारी हुन्छ र कसरी तपाइँको इन्धन माइलेज तल जान्छ जब तपाइँ वातानुकूलनको साथ ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो किनभने ईन्जिनले कडा परिश्रम गर्न बेल्ट-संचालित एसी कम्प्रेसरलाई शक्ति दिन आवश्यक छ र अझै पनी स्थिर गति कायम गर्दछ। जहाँसम्म तपाईंको पानी पम्पको सवाल छ उही परजीवी ऊर्जा गुमाउने क्रममा छ।
एक इलेक्ट्रिक पानी पम्प बेल्ट पावर आवश्यकता छैन। यसको सट्टामा, यो ब्याट्री पावरमा चल्छ। त्यसोभए तपाईं अचम्ममा पर्नुहोला, किनकि थर्मोडायनामिक्सको त्यो पेस्की कानूनले भन्छ कि तपाईं उर्जा सिर्जना गर्न वा नष्ट गर्न सक्नुहुन्न, के तपाईं ब्याट्री रिचार्ज गर्न ऊर्जा प्रदान गर्ने (बेल्ट-चालित) अल्टरनेटरमा एउटा ठूलो भार मात्र राख्नुहुन्न? के ऊर्जा घाटा अरू कतै बनाउनु पर्छ र प्रदर्शनलाई असर गर्ने छैन?
केहि शब्दहरूमा, तपाईले याद गर्नुहुने तरिकामा होईन। थर्मोडायनामिक्सको कानून अझै पनी सही छ। यद्यपि, यांत्रिक पानी पम्पहरू सँधै स्पिन हुन्छ, वेगमा समान रूपमा इन्जिनको गतिमा। नतिजाको रूपमा, कहिलेकाँही तपाई धेरै शीतलक पम्प गर्दै हुनुहुन्छ जब इन्जिन वास्तवमै चाहिने भन्दा तातो हुँदैन। त्यो ऊर्जा व्यर्थ हो। कहिलेकाँही तपाइँको इञ्जिनलाई यो भन्दा यो बढी कूलि needsको आवश्यकता हुन्छ, जस्तै जब तपाइँ तातो दिनमा हार्ड ड्राइभिंग पछि तपाइँको कार बन्द गर्नुहुन्छ। यसले छिटो केहि ईन्जिन कम्पोनेन्ट लगाउन सक्छ।
एक विघुतीय पानी पम्प, यसको विपरित, निर्मातालाई सेट गर्न अनुमति दिन्छ (अधिक परिशुद्धताका साथ) कति तापक्रम दायरामा इञ्जिनमार्फत कूलन्ट कोर्सहरू। त्यसोभए यो वास्तवमै अझ बढी कुशल र तपाईंको इञ्जिनको विशिष्ट शीतलन आवश्यकताहरूको साथ ट्यूनमा छ।